Ingqondo yomntu ngumntu, umnqweno nguMtyholi.
Umnqweno wesini kunye nomnqweno wamandla wadala isihogo.
Isihogo sinamandla kwihlabathi lezinto ezibonakalayo, i-libra, isini, kunye ne-psychic world, virgo-scorpio, form -ifiso.
Vol. 12 NOVEMBA, 1910. 2
AKUKHO lizwi liye lashukumisa kwaye lakhula, lacaphuka kwaye lothukile, likhathazekile kwaye likhathazeka ingqondo yomntu ngaphezu kwengcinga kunye nelizwi lesihogo. Phantse wonke umntu uyaziqhela, uninzi alunakuthetha ngaphandle kwayo, ezinye luye luziveze ngaphezulu, kodwa, ngaphandle kwecawa kunye nokuvuma, bambalwa abacinga ixesha elide ngayo ngaphandle kokukhetha ukufumana ukuba ikho, yintoni, kwaye ukuba ikho , kutheni kunjalo.
Ingcinga yesihogo inyanzeliswa zizo zonke iinkqubo zenkolo kwaye ivakaliswa ngelizwi elinikwe abantu ngabahlohli benkolo leyo. Nditsho nezizwe zasendle ziyayamkela ingcinga yesihogo; Nangona bengekabi nayo inkolo bajonge phambili kwindawo ethile okanye kummiselo othile ovakaliswa ezingqondweni zabo ngegama elimi esihogweni.
Ingcinga yesihogo iza kuthi ngakumbi kwimithombo yesiHebhere, isiGrike kunye nesiLatin; ukusuka kumagama afana negehena, sheol, tartaros, hades. Abafundisi bezakwalizwi abangamaKristu babuyela kwizimvo zakudala kwaye bavuselele, bandisa, bapeyinta, bahombisa, ezo ntsingiselo zindala zaba ngamanani anqabileyo kunye nenkangeleko njengoko kucacisiwe kukungxamiseka konqulo kunye neenjongo ezibashukumisayo. Ke kaloku isihogo sichazwe njengendawo angena kuyo umntu ukuba abe nokuva ubunzima, intuthumbo, nentuthumbo yamanqanaba ahlukeneyo obushushu kunye nexesha.
Isihogo kuthiwa sikho kwenye indawo apha emhlabeni. Kuthiwa isembindini womhlaba; kwaye kwakhona, kwiindawo ezisezantsi zomhlaba, kwaye, ukuba ube phantsi kwethu. Kuthethwa malunga nemeko enjengomngxunya, ingcwaba, umhadi okanye umhadi wentshabalalo, umngxunya ongenamhlaba, umhlaba wezithunzi, indawo engabonakaliyo okanye ingingqi, indawo yokuhlala yabangendawo. Kuthiwa yindawo enomngxuma, umngxunya, indlu yokuntywila, intolongo, indawo yokuthintela iintlungu, indawo efihliweyo okanye efihliweyo, indawo yentuthumbo, umlambo okanye ichibi lomlilo, yindawo yemimoya etyhidiweyo. Ikwabizwa ngokuba kunzulu, kumnyama, konke kuyonakalisa, akunakuze kuncede, uzisole, kunye nentuthumbo engapheliyo. Ichazwa njengendawo apho umlilo nesulfure kuvutha ngokungagungqiyo nalapho umbungu uququmbele khona ungaze waneliswe.
Isihogo semfundiso yenkolo sisetyenziselwe ukugxininisa ezingqondweni zabantu imfuneko engxamisekileyo yokuba bafumane inkolo kwaye ke babalekele esihogweni. Kodwa bengonelisekanga kukunikeza imizekelo ebabazekayo kubantu abakhulileyo, abafundi bezakwalizwi baye bazibandakanya ekuchazeni abantwana abancinci ngamaziko esihogo. Ukubhala malunga neehells ze-Brahmanism, uMonier Williams ubathelekisa kakuhle nesihogo sobuKristu kwaye ucaphule incwadi yamaRoma Katolika yabantwana ebhalwe ngu-Mfu. J. Faniss. Utata woMfundisi, kwinkcazo yakhe, uzuze emngxunyeni wesine eyi ketile ebilayo. “Mamela,” utsho, “kuvakala isandi esifana neye ketile ebilayo. Igazi liyabila kwiingqondo ezikrelekrele zaloo nkwenkwe; Ingqondo iyabanda kwaye ibhabha entloko; umongo wayo ubila emathanjeni akhe. Uqhubeke athi, "Umngxunya wesihlanu yi-oven eshushu ebomvu engumntwana omncinci. Yiva indlela ekukhala ngayo ukuphuma kwayo; Bona ukuba ijikajika njani kwaye ijijeke emlilweni; Ibetha entloko ephahleni yehovini. ”Le ncwadi yabhalelwa ukunceda abantwana ngutata wecawa yamaRoma Katolika.
UMonier Williams ubhekisa komnye umbhali onika umbono obanzi ngokubanzi kunye nokupheliswa jikelele nokupheliswa kwabangendawo. Ubhala athi, "Umhlaba uya kuguqulwa ube yichibi elikhulu okanye ulwelo oluvuthayo lomlilo, apho abantu abakhohlakeleyo beya kugungxulwa, behlala besiqhwithela, apho baya kuphoswa ngapha nangapha, bangabi nosuku lokuphumla okanye busuku . . . iintloko zabo, amehlo abo, iilwimi zabo, izandla zabo, iinyawo zabo, iinwele zabo, kunye nemithambo yabo, iya kuhlala igcwele, yomlilo inyibilikile, ivutha umlilo, inyibilikisa amatye.
Ukubuyela kwiinkcukacha, uMonier Williams ucaphula kwintshumayelo yomshumayeli odumileyo, oxelela abaphulaphuli bakhe ngento abanokuyilindela njengexesha labo-ngaphandle kokuba baya kungena kolo nqulo njengeyona nqanawa yokhuseleko. Xa uthe umphefumlo wakho wawuthuthuka wedwa; iya kuba sisihogo sayo oko; kodwa ke ngeMini yomgwebo umzimba wakho uya kujoyina umphefumlo wakho kwaye uya kuba namanqatha angamawele; umzimba wakho ufunga ngamasebe egazi, nomphefumlo wakho ukhathazwa kukugula. Ngomlilo ovuthayo, kanye njengaleyo sinayo emhlabeni, umzimba wakho uya kuba, njenge-asbestos, ngokungapheliyo ungacimekiyo; Zonke iindlela zakho zeenyawo zakho zeenyawo zentlungu ukuba uhambe ngazo; Yonke imithambo yokutya apho umtyholi aya kudlala ngonaphakade kwisimo sakhe sobuxoki sesililo esingatshiyo. ”
Le yinkcazo entle kwaye iyalanda xa ithelekiswa namaxesha anamhlanje. Kodwa njengoko iingqondo ziya zikhanyiseleka ngakumbi kwezo ngxoxo zintle ziyaphulukana nobunzima, kwaye ke ezo ndidi zihells ziphuma kwifashoni. Ngapha koko, ngokunyuka kwenani leenkolelo ezintsha, inkolelo yefashoni ngoku iya isiba: akukho sihogo. Ke i-pendulum iguquka ukusuka kwelinye ukuya kwelinye.
Ngokoluhlobo lweengqondo ezifika kwimizimba yenyama, iinkolelo zomntu phakathi, ngokuchasene okanye malunga nesihogo zitshintshile kwaye ziya kutshintsha amaxesha ngamaxesha. Kodwa kukho loo nto inikileyo kwaye isenokubangela izimvo kunye neenkolelo malunga nesihogo. Isihogo asiyiyo into epeyintiweyo. Kodwa ukuba akukho sihogo ngoku akunakuba sabakho esihogweni, kwaye zonke iingqondo ezikhulu eziye zadibana nomxholo ziye zalwa nento engazange yabakho, kunye nezigidi ezingenakubalwa zexesha elidlulileyo abaye baphila kwaye bacinga ngesihogo bajonga phambili kwaye bazixhalabisa malunga nento engenguye engazange ibekho ngaphambili.
Imfundiso ebanjwa ziinkolo zonke inento kuyo eyinyani, nento emayifundwe ngumntu. Xa amanani kunye nomsebenzi we-fresco ubekwe ecaleni, umntu ufumana eyona nto ibalulekileyo kwimfundiso.
Izinto ezimbini eziphambili kwimfundiso yile, okokuqala, ukubandezeleka; Isiphumo sesibini, isenzo esingalunganga. Kukho into emntwini ebizwa ngokuba sisazela. Isazela sixelela umntu xa kungenzi into ephosakeleyo. Ukuba umntu akasithobeli isazela, wenza into ephosakeleyo. Xa enze okungalunganga uyahlupheka. Ukubandezeleka kwakhe kuyinxalenye yezenzo ezigwenxa; izakuba ngokukhawuleza okanye itshitshisiwe njengoko kumiselweyo zizizathu ezikhokelela kwisenzo. Ulwazi lwendalo lomntu lwento elungileyo nengalunganga, kunye nokubandezeleka akufumanayo, zezi zinto zimbini zokukholelwa kwakhe esihogweni. Oku kumbangela ukuba amkele imfundiso yesihogo semfundiso yezakwalizwi, ecwangcisiweyo, yakhiwa kwaye yafakelwa iimpahla, izixhobo kunye namafutha, eyimfuneko emsebenzini owenziwayo.
Ukusuka kwinkqubo yenkolo entsonkothileyo ukuya kukholo olulula lohlanga olungenakholo, umntu ngamnye ucwangcisa kwaye alungise isihogo njengendawo kunye nezinto ezifanelekileyo ukubangela ukungakhululeki kunye nentlungu kubemi besihogo. Kumazwe atshisayo inkolo yemveli ibeka isihogo eshushu. Abantu abahlala kwiqondo lobushushu leparali banesihogo esibandayo. Kwindawo enobushushu abantu baneehells ezishushu nezibandayo. Ezinye iicawa ziyahluka kwinani. Ezinye iinkonzo zibonelela ngeenqwelwana ezingamashumi amabini anesibhozo okanye nangaphezulu ngamaqhezu kunye namasebe ukwenzela ukuba zibe nendawo yokuhlala efanelekileyo kwiimfuno zazo zonke.
Iicawa zamandulo zibonelela ngeehells ngokokholo lwabo. Unqulo ngalunye kwezi nkolo zinikezela ngesihogo, kungekuko ngenxa yeecawa zabo kwaye bakholelwa kwiimfundiso ezithile, kodwa ngenxa yezinye iinkolo zobuKristu, abantu bezinye iicawa, kunye nabakholelwa kwinkolo. Ukusuka kwiihells zenqanaba eliphakathi kunye eliphakathi ukuya kwezona zigxinisayo kunye nezinyamezelayo, iihells zazo zonke iintlobo kunye needigri kukholelwa kuzo.
Into ephambili yesihogo senkolo yidemon yayo. Inkolo nganye inedemon yayo kwaye idemon nganye yahlukile ngohlobo kunye nenkonzo enikelwa kwezinye iidemon. Umtyholi usebenzela iinjongo ezimbini. Uyamhendela kwaye abenge umntu ukuba enze okungalunganga, kwaye uqinisekile ukubamba umntu okwenzayo. Usathana uvumele yonke inkululeko ayinqwenelayo kwimizamo yakhe yokuhenda umntu, kwaye ukuba uphumelele kwimizamo yakhe ufumana indoda ibe ngumvuzo wakhe.
Inyani engasemva yokukholelwa kumtyholi kukubakho komntu onomnqweno kunye nefuthe kunye namandla phezu kwengqondo yakhe. Iminqweno yomntu inesilingo sakhe. Ukuba umntu uvumela ukuqhubela phambili komnqweno ongekho mthethweni-okungekho mthethweni ngokwesazela sakhe kunye nomgangatho wokuziphatha-ubanjiwe ngalo mnqweno ngokukhuselekileyo njengoko usathana esithi ubabamba abalawulwa bakhe. Zininzi iindlela zentlungu kunye nenkanuko kumnqweno ongalawulekiyo, iidemon ezininzi kunye neehells kunye neendlela zokubandezeleka zikhona.
Iingqondo zabantwana kunye nezokukhohlisa kunye nezoyikayo zihlelwe kwaye zangafanelekanga ngenxa yezikhundla zazo ebomini iimfundiso zobuDemon zee-helikopta. U-Thixo uye wanyeliswa kwaye umtyholi wahletywa ngogxothiweyo, nditsho okanye ebullient expersers yemfundiso.
Ayilunganga into eyoyikisayo oomama kunye nabantwana kwaye yoyikisa abantu ngeemfundiso ezibi ngesihogo. Kodwa kufanelekile ukuba wonke umntu azi malunga nesihogo, phi, yintoni, kwaye kutheni, kwaye umntu unento yokwenza nayo. Ininzi into eyinyani kwizitetimenti ngokubanzi malunga nee-helolo zenkolo, kodwa iimfundiso kunye nokuhluka kwazo ziye zatyholwa, zathwaxwa, zarhoxiswa, zenziwa ngendlela engeyiyo, kangangokuba ingqondo ichasa, ihlekisa, iyala ukukholelwa okanye izityeshela iimfundiso.
Isihogo asisohlwayo sooqobo, nokuba sesomzimba okanye umphefumlo. Isihogo asiyondawo apho ngaphambi okanye nasemva komhla womgwebo abantu baya kuvuswa kwaye baphoselwe apho baya kutsha khona ngonaphakade bangaze batshiswe. Esihogweni asiyondawo, apho iintsana okanye imiphefumlo yeentsana kunye neyabangabhaptizwanga ihamba khona ziye kufumana izoyikiso zasemva kokuba zifile. Kwaye ayisiyondawo apho iingqondo okanye imiphefumlo ifumana isohlwayo salo naluphi na uhlobo kuba bengangeni esifubeni secawa ethile okanye bamkele inkolelo ethile okanye amanqaku akhethekileyo okholo. Isihogo asiyondawo okanye umhadi, umngxunya, okanye intolongo, okanye ichibi elivutha umlilo apho izidumbu zomntu okanye imiphefumlo ilahlelwa khona emva kokuba efile. Isihogo asisiyondawo yokufumana lula okanye yokulahla isithixo esinomsindo okanye esithandekayo, kwaye ke abohlwaya abo bangayithobeliyo imiyalelo yakhe. Akukho cawa inoyolo esihogweni. Isihogo asiyonto yokuxhamla nayiphi na icawa okanye inkolo.
Isihogo sinolawulo kumhlaba mbini; ilizwe elibonakalayo kunye ne-astral okanye i-psychic world. Izigaba ezahlukeneyo zeemfundiso zesihogo zisebenza komnye okanye omabini ala mazwe. Isihogo sinokungena kwaye sinamava ngelixa sikwindawo yenyama kwaye amava anokwandiswa kwihlabathi le-astral okanye le-psychic ngexesha lokuphila ngokomzimba okanye emva kokufa. Kodwa oku akufuneki kwaye akufuneki kubangele uloyiko okanye uloyiko. Kuyinto yendalo kwaye ngokulandelelana njengobomi kunye nokukhula kwihlabathi lomzimba. Ubukhosi besihogo kwimbonakalo yomzimba sinokuqondwa ngayo nayiphi na ingqondo engalungelelaniswanga ngokwaneleyo okanye engathambekiyo ukuba ithintelwe ekuqondeni. Ubukhosi besihogo kwilizwe le-psychic okanye i-astral kwihlabathi bunokuqondwa nangomntu ongavumiyo ukuba akukho-astral okanye i-psychic world kunye nalowo ungakholelwa ukuba ukufa kuphetha konke kwaye akukho lizwe elizayo emva kokufa.
Emntwini ngamnye ngamanye amaxesha uya kungqinwa ubukho bento evezwe ligama lesihogo. Ubomi kwihlabathi elibonakalayo buya kuyibonisa kuyo yonke indoda. Xa umntu engena kwilizwe lemilingo amava akhe aya kunika obunye ubungqina. Akunyanzelekanga, nangona kunjalo, ukuba umntu alinde de afike ekufeni ukuze afumane isihogo se-astral okanye se-psychic. La mava anokubakho ngelixa ehlala emzimbeni wakhe womzimba. Nangona ilizwe lemilingo linokuba ngamava emva kokuba lifile alinakukwazi ukujongana nalo ngobukrelekrele. Isenokuba yaziwa kwaye isebenza ngobukrelekrele ngelixa umntu ehlala emzimbeni wenyama nangaphambi kokuba afe.
Isihogo asisiyo sigxina kwaye asisigxina. Itshintsha kumgangatho kunye nenani. Umntu unokuchukumisa imida yesihogo okanye akhangele iimfihlakalo zobunzulu bayo. Uya kuhlala engenalwazi okanye afunde kumava akhe ngokobuthathaka okanye ubugqwetha kunye nobungakanani bengqondo yakhe nangokuzimisela kwakhe ukuma iimvavanyo kwaye avume izibakala ngokokufumanisayo.
Kubonakala ngathi zimbini iintlobo zesihogo kumzimba wenyama. Kukho isihogo somntu, esinendawo yaso emzimbeni wakhe. Xa isihogo emzimbeni wakho sisebenza, sivelisa iintlungu abantu abaqheleneyo nazo. Kukho ke esihogweni ngokubanzi okanye ekuhlaleni, kwaye umntu ngamnye enenxalenye yakhe. Isihogo asifumaneki kwaoko, kwaye ukuba sikho, siqondwa kancinci kwaye siphelele. Akukho ndawo zibukhali zibonakalayo.
Njengoko umntu eqhubeka nokukhangela uya kufumanisa ukuba "usathana kunye neengelosi zakhe" banokuzithatha-nangona zingezizo ezomzimba. Umtyholi wesihogo somntu kukukhathalela nangomnqweno wolawulo. Iingelosi zeedemon, okanye iidemon ezincinci, zizezona zincinci zokutya, iinkanuko, iminqweno neenkanuko ezithobela kwaye zikhonza umnqweno wazo ophambili, umtyholi. Umnqweno oyintloko uyaqiniswa kwaye ubekwe kumkhosi wakhe weedemon ezincinci, iminqweno, kwaye unikwe amandla kwaye uvumele ubukhosi ngengqondo. Ngelixa enikiwe okanye evunyelwe ukuba asebenzise amandla usathana akaqondwa kwaye isihogo sihlala singaziwa kodwa sisasebenza. Ngelixa umntu ethobela, edlala okanye esenza izivumelwano kunye neenkanuko zenkanuko, idemon kunye nesihogo azaziwa.
Nangona umntu egqobhoza imida yakhe kwaye efumana ezinye zeentlungu ezifumaneka ngaphandle kwesizinda, ezi azaziwa ngexabiso labo lokwenyani kwaye zithathwa njengobubi bobomi. Ke ubomi emva kobomi umntu bufika buye kwihlabathi elibonakalayo kwaye avakalise imida yesihogo, kwaye onwabele ukonwaba kancinci kwaye abahlawulele ixabiso okanye isohlwayo sesihogo. Nangona esenokufika kakuhle kwisizinda akakwazi ukubona kwaye akazi ukuba sisihogo. Ke isihogo sihlala singabonakali kwaye singaziwa ebantwini. Ukubandezeleka kwesihogo kulandela ukungaxhamli, okungekho mthethweni kunye nokuhlutha kwenkanuko neminqweno, njengokubawa okungaphaya, ukusebenzisa iziyobisi notywala, kunye nokungafaniyo nokuxhaphaza umsebenzi ngokwesondo. Kwisango ngalinye lesihogo kukho ukhuthazo lokungena. Ukuvuselela umdla yimbonakalo yolonwabo.
Ngalo lonke ixesha umntu elandela ngokwemvelo kunye neminqweno yakhe, akasayi kwazi malunga nesihogo, kodwa uya kuphila ubomi bendalo kunye nokuzonwabisa kwakhe kwendalo kunye nokufumana isihogo ngamanye amaxesha. Kodwa ingqondo ayiyi kwaneliswa kukushiya nayiphi na indawo okanye imeko yendalo iphela. Ke ngokungazi kwayo ingqondo ngamanye amaxesha iya ngokuchasene nomthetho, kwaye xa isihogo singenisiwe. Ingqondo ifuna ulonwabo kwaye iyifumane. Njengoko ingqondo iqhubeka nokonwaba, ekufuneka yenziwe ngamalungu engqondo, bayabanjiswa; baphulukana nomsebenzi wabo wokuphindaphinda kwaye bafuna isikhuthazo esikhulu; ke iingqondo ziyabongozwa ngabo ukuba zenze ukonwaba ngakumbi nangakumbi. Ukucinga ulonwabo olungaphezulu, kwaye ukuzama ukwandisa ukonwaba, kuyangqubana nemithetho kwaye ekugqibeleni kufumane isohlwayo sokubandezeleka nentlungu. Ingene esihogweni kuphela. Ingqondo inokuphuma esihogweni emva kokuba ihlawule isohlwayo sokubandezeleka okubangelwa sisenzo esingekho mthethweni esisibangeleyo. Kodwa ingqondo engenalwazi ayifuni ukwenza le nto kwaye izama ukubalekela isohlwayo. Ukubaleka ukukhohlisa, ingqondo ifuna njengento yokuthintela ukonwaba ngakumbi kwaye ibanjelwe ngokukhawuleza esihogweni. Ke ingqondo isuka ebomini iye ebomini iyaqokelelana, ikhonkco ngekhonkco, amatyala. Oku kwenziwa ziingcinga kunye nezenzo. Olu luxinano aboshwe ngalo kunye nokubanjwa kwalo ngokuzilawula kwakhe, uMtyholi. Onke amadoda acingayo ahamba ngandlela thile kwisizinda sesihogo kwaye abanye bahambe kakuhle kwiimfihlakalo zayo. Kodwa bambalwa abafundile ukuba banokuthatha njani ukuqaphela, ngenxa yoko abayazi ukuba bakude kangakanani, bengazi nokuba mabathathe eyiphi indlela ukuze baphume.
Nokuba uyazi okanye ayazi, yonke indoda yokucinga ehlala kwihlabathi lenyama isesihogweni. Kodwa isihogo asisayi kufunyanwa ngenene kwaye umtyholi akasayi kwaziwa kuye ngeendlela eziqhelekileyo nezilula zendalo. Ukufumana isihogo kunye nokwazi umtyholi kufuneka aqhubeke ukukwenza ngobulumko, kwaye kufuneka akulungele ukuthatha iziphumo. Iziphumo zikukuqala ukubandezeleka, okuya kukhula ngokuthe ngcembe. Kodwa ekugqibeleni kukho inkululeko. Umntu kufuneka angaxeleli mntu ukuba uza kufumana isihogo kwaye alawule umtyholi. Unokwenza kwaye kufuneka enze zombini ngelixa ehlala emhlabeni.
Ukufumana isihogo kwaye udibane nomtyholi kufuneka kuphela ukuba uxhathise kwaye woyise kwaye ulawule umnqweno wakhe wokulawula. Kodwa umntu akasoloko ecel 'umngeni ukulawulwa okumangalisayo kwendalo yakhe. Lo mnqweno mkhulu umi ngasemva, kodwa uyintloko yazo zonke iingelosi, iidemon ezincinci, iminqweno encinci. Umntu ke ngoko, xa athe wacela umngeni kuDemon, udibana nomntu oyedwa kubaphathi bakhe okanye kubantwana abaphantsi. Kodwa nokuba ucela umngeni kwenye yezi ngokwaneleyo ukuba unike umceli mngeni omkhulu umlo.
Ubomi bonke bungathatyathwa ekoyiseni nasekulawuleni ezinye zeenkanuko ezincinci. Ngokulwa nokoyisa inkanuko ethile, okanye ngokwala ukulawulwa kunye nokusebenzela ukufezekisa umnqweno othile ongalunganga, umntu woyisa enye yeengelosi zikaMtyholi. Ukanti akahlangani noMtyholi omkhulu. Umnqweno omkhulu, inkosi yakhe-idemon, ihlala ikude ngasemva, kodwa ibonakalisiwe kuye ngamanqaku ayo amabini: isondo kunye namandla; bamnika isihogo-emva konwabo. Ezi zimbini, ezesondo kunye namandla, zinemvelaphi yazo kwiimfihlakalo zendalo. Ngokubohlula nokulawula ngobukrelekrele umntu usombulula ingxaki yobukho aze afumane inxenye yakhe kuyo.
Umzamo ozimiseleyo wokoyisa umnqweno we-master ngumceli mngeni kuyo kunye nokubiza usathana. Injongo yesini ngumanyano. Ukuze wazi ubunye umntu makungoyiswa yiminqweno yesini. Imfihlo kunye nenjongo yamandla kukufumana ubukrelekrele obunceda bonke. Ukuze ube nobukrelekrele ngale ndlela umntu kufuneka oyise kwaye akhuseleke kumnqweno wamandla. Lowo ulawulwa ngumnqweno wesini okanye onomdla wamandla akanokwazi ukuba luyintoni na kwaye yintoni na olo lwazi lobulumko. Ukusuka kumava ayo kubomi obuninzi ingqondo ifuna ukuphuculwa, nokuba kungeenkqubo zokuqonda okanye ngeminqweno yobuThixo okanye zombini. Njengoko ingqondo iqhubeka inkqubela phambili kuphuhliso lwayo ihlangana kunye nobunzima obuninzi kwaye kufuneka ibeke okanye ithathe uninzi lwezinto ezidibanisayo zeemvakalelo kunye nezinto ezininzi ezikhangayo zengqondo. Ukukhula okuqhubekayo kunye nokukhula kwengqondo ngokungathandabuzekiyo kubangela ukuba babandakanyeke kumlo omkhulu kunye nomtyholi, umzabalazo wesini, kwaye emva koko, ukuzithoba kokugqibela kedemon ngokuhlula umnqweno wamandla.
Iintsomi kunye nesoseji ziveze kwaye zachaza ingqondo ebandakanyekileyo emzabalazweni, ngokuboniswa okanye iinkcazo ezinje ngeLaocoon, umsebenzi kaHercules, intsomi kaThembetheus, ibali lebhanti legolide, ibali lika-Odysseus, ibali leHelen kaTroy.
Uninzi lweemfihlakalo zingenile esihogweni, kodwa bambalwa abaye boyisa kwaye bamthoba uMtyholi. Bambalwa abazimiseleyo okanye abakwaziyo ukuqhubeka nomlo emva kweseti yokuqala kwaye-ke, emva kokuba benzakalisiwe kwaye benxunguphele ngedemon ephindwe kabini yomnqweno wesini kunye nokunqwenela amandla, banikezele, bayeka umlo, babethwa , kwaye bahlala phantsi kweminqweno yabo. Ngexesha lomzabalazo, bahlupheka kakhulu ngomkhonto njengoko babezimisele ukuma. Emva kokunikezela, abaninzi bacinge ukuba boyisile ngenxa yokuphumla emva komlo nangenxa yempumelelo ethile elandelayo njengomvuzo wokuzithoba emva komlo. Abanye baye bazigxeka njengabaphuphayo abangaphucukanga nabazizidenge ngokwenza into ehlekisayo okanye engenakwenzeka. Akukho zimpawu zangaphandle zempumelelo xa umntu sele elwile kwaye woyisa idemon yakhe kwaye wadlula esihogweni. Uyayazi, kwaye zonke iinkcukacha zidibene nayo.
Uhlobo olubi kakhulu okanye inqanaba lesihogo, kukubandezeleka okanye ukuhlukunyezwa ngomzimba wenyama. Xa umzimba wenyama usempilweni kwaye ukhululekile ukuba akukho ngcinga okanye siphakamiso malunga nesihogo. Indawo yempilo kunye nentuthuzelo ishiywa xa imisebenzi yomzimba iphazanyiswa, ukwenzakala emzimbeni kusenziwa, okanye xa inkanuko yendalo yomzimba ingoneliseki. Uhlobo lodwa lwesihogo sokwenyama esinokubakho emntwini onamava esivakalelwa xa siphila kweli lizwe lenyama. Umntu uhlangabezana nesihogo somzimba njengesiphumo sendlala kunye nentlungu. Xa ukutya kufunwa yindlala yomzimba kuqala, kwaye indlala iba nzulu njengoko umzimba unqatshelwa ukutya. Umzimba owomeleleyo kwaye usempilweni uyachaphazeleka yintlungu yendlala kunoko sele uphelile kwaye udiniwe. Njengoko ukutya kunqatshelwe umzimba kwaye nomzimba ukhala ngokutya, ingqondo iyachukumiseka kwaye yandise indlala ngokucinga ngokutya oko unganako. Njengoko ingqondo iqhubeka ukucinga ukuba ukubandezeleka komzimba kuyakhula, kwaye usuku nosuku umzimba uya usiba krwada, kwaye usebenze. Indlala iba yindlala. Umzimba uyabanda okanye ube nefiva, ulwimi luye lubethise umzimba de ube ngumzimba ophetheyo kwaye ngalo lonke ixesha ingqondo ibangela ukubandezeleka komzimba ngakumbi ngokucinga ngokufunwa ngumzimba. Umntu ovelisa ukubandezeleka ngokuzila ukutya ngokuzithandela akafumani sasihogo ngaphandle kwesigaba sokuthamba, kuba ukuzila ukutya kukwenza ngokuzithandela nangenjongo ethile kwaye kujongwe ngengqondo. Ngokuzila ukutya ngokuzithandela ingqondo ayisiqinisi indlala ngokunika ulangazelelo lokutya. Iyamelana nengcinga kwaye ikhuthaza umzimba ukuba ubambe ixesha elimiselweyo, kwaye ingqondo ihlala ixelela umzimba ukuba uyakufumana ukutya xa kugqityiwe ukuzila. Oku kwahluke ngokupheleleyo kwisihogo esinyamezelwe yindlala engagalelwanga.
Umntu ophilayo akaqali ukuqonda ukuba siyintoni isihogo sentlungu yomzimba ade abe namava anjengokutsiba izinyo. Ukuba iliso lakhe litshekiwe, imilebe yakhe etyumkileyo, ukuphefumla kuye kwaba nzima; Ukuba uwela kwi-asidi ye-acid ebilayo okanye ulahlekelwe sisikali sayo, okanye ukuba unomhlaza odlayo emqaleni, zonke iimeko zokubandezeleka okubangelwa ziingozi kwaye apho amaphephandaba azele, naliphi na amava anjalo aya kubeka esihogweni . Ubunzulu besihogo sakhe buya kuba ngokokuziva kwakhe kunye nomthamo wakhe wokubandezeleka, kunye nokwanda kokubandezeleka komzimba ngengqondo eyoyikisayo neyoyikisayo, njengoko bekunjalo nangamaxhoba okubuza eSpain. Abo bambonayo abayi kusazi isihogo sakhe, nangona besenokungabi nanceba kwaye bamenzele oko banako. Ukuxabisa isihogo sakhe umntu kufuneka akwazi ukuzibeka kwindawo yomntu ogulayo ngaphandle kokoyiswa yintlungu. Emva kokuba kuphelile ngalowo usweleyo esihogweni unokulibala, okanye aphuphe kwakhona.
Akukho nto injalo okanye imeko emva kokufa njengesihogo semfundiso yenkolo, ngaphandle kokuba umyili-umzobi-mzobo uyakwazi ukuthwala kunye nemifanekiso awayeypeyile ngexesha lobomi bakhe bomzimba. Oku akunakwenzeka; kodwa nokuba kunokwenzeka, abanye ngaphandle kwakhe abayi kuba nakho. Iihells zemifanekiso zikho kuphela kulowo ubapeyileyo.
Ukufa kuyinto yemvelo njengokuzalwa. Amazwe emva kokufa anjengokwendalo kwaye alandelelana njengamanqanaba alandelelanayo okukhula komzimba wenyama. Umahluko kukuba, kwasebusaneni ukuya ebudodeni epheleleyo, kukho ukuqubisana, ukudibana, kubo bonke abantu abenziwe; lo gama, ekufeni okanye emva kokusweleka kubekwa ngokuthe ngcembe ngengqondo yazo zonke iindawo eziphelele kunye nengqondo, kunye nokubuyela kubumsulwa obulunge kakhulu.
Ingqondo ebambelela kakhulu kwiimvakalelo zenyama kwaye izonwabisa kakhulu ngayo iya kuba nesihogo esiqatha. Isihogo sayo silele ekwahluleni kwengqondo kwiminqweno kunye nakwezokuva, kwimibandela yokufa. Isihogo siphela xa ingqondo yahlulahlula kwiminqweno yenyama ebambelele kuyo. Ekufeni kubakho ngamanye amaxesha, kodwa akuhlali kunjalo, kukuqhubeka kwesazisi njengomntu ofanayo wengcinga njengobomi bomzimba. Ezinye iingqondo zilala ixesha emva kokufa. Iingqondo zobuqu ezibambelele kwimbono yokuba zenziwe kwaye zixhomekeke kwiimvakalelo zinesonahogo somlilo. Isihogo sokufa emva kokuqala siqala nje ukuba ingqondo ikhulule emzimbeni wenyama kwaye ijonge ukubonakalisa ukubaluleka kobomi bayo bangaphambili. Umnqweno olawulayo wobomi, oqiniswe yiyo yonke iminqweno emincinci, ubeka ingqalelo kwingqondo kwaye uzama ukunyanzela ingqondo ukuba ivume kwaye ivume ukunyaniseka. Kodwa ingqondo ayinakho, kuba ikwindawo eyahlukileyo kwaye ifuna inkululeko kwiminqweno efana nokungahambelani nezinto ezithile ezigcinwe ngexesha lobomi kodwa engakwaziyo ukubonakalisa. Isihogo sihlala kuphela ixesha elifunwa yingqondo yokuzikhulula kwiminqweno ethintela oko, ingqondo, ekufuneni indawo yayo. Ixesha lingaba kodwa okomzuzwana okanye linokuba lixesha elide. Ixesha, umbuzo wexesha lesihogo, yinto leyo eye yakhokelela kwisihogo sangonaphakade okanye esingapheliyo. Umfundisi wezakwalizwi uqikelela ukuba ixesha lesihogo alinasiphelo-njengokongezwa kwengcinga yakhe yexesha kwizinto zokoqobo. Ixesha lokwenyama, okanye ixesha lehlabathi lomzimba, alikho nakweyiphi na imeko emva kokusweleka. Urhulumente ngamnye unexesha lawo. Ngokobunzulu boluvo lwexesha elingapheliyo okanye ixesha elide kakhulu linokubonakala ngathi litsaliwe umzuzwana, okanye umzuzwana linokwandiselwa kwiphakade. Kwengqondo ebanzi yesenzo esikhawulezileyo, ingunaphakade lesihogo kunokuba ngamava okomzuzwana. Ingqondo edakumbileyo nesiyatha inokufuna ixesha elide lesihogo. Ixesha liyimfihlakalo enkulu kunesihogo.
Ingqondo nganye iyodwa inoxanduva lokufumana ixesha elide okanye elifutshane esihogweni emva kokufa kunye nobomi. Ngexesha emva kokuba efile kwaye ngaphambi kokuba ahambe ngaphaya kwesihogo, ingqondo kufuneka idibane kwaye yoyise umtyholi. Ngokungqinelana namandla eengqondo kunye nokucaciswa kwengcinga, umtyholi uya kuthatha ubume kwaye abonakaliswe yingqondo. Kodwa usathana akanakubumba ukuba ingqondo ayinakukwazi ukumnika isimo. Umtyholi akabonakalisi ngendlela efanayo kuzo zonke iingqondo. Ingqondo nganye inedemon yayo. Idemon nganye ifane ngokuchanekileyo kumgangatho kunye namandla kwingqondo eyahlukeneyo. Umtyholi ngumnqweno oye walawula kuyo yonke iminqweno yobomi esandul 'ukuphela, kwaye isimo sakhe sisimo esiyinxalenye yawo onke amacebo obomi behlabathi kunye nokwenyama. Kamsinya nje emva kokuba uMtyholi ebonwa yingqondo, kukho umlo.
Idabi asiyonto yokuntywila, ukuduma nemibane, umlilo nesibabule, ngokungathi ngumzimba nomphefumlo. Umlo uphakathi kwengqondo kunye nomnqweno. Ingqondo ityhola uMtyholi, kwaye uMtyholi umangalela ingqondo. Ingqondo iyalela idemon ukuba ihambe, kwaye umtyholi uyala. Ingqondo inika isizathu, usathana uphendula ngokubonisa umnqweno owavunywa yingqondo ngexesha lobomi bomzimba. Umnqweno ngamnye kunye nesenzo esenziweyo okanye esivumelekileyo ngengqondo ngexesha lobomi bufakiwe kwaye sibethelelwa engqondweni. Iminqweno ibangela intuthumbo. Ukubandezeleka sisihogo somlilo nesalfure kunye nokuthuthumbisa okuye kwajikiswa ngumfundisi wezakwalizwi kwizigqibo zakhe. Umtyholi ngumnqweno wobomi, woklanywa ukuba ubunjwe. Iindlela ezininzi iicawe ezahlukeneyo azinike iidemon zazo kungenxa yeentlobo ezahlukeneyo zeedemon kunye neminqweno, ezinikezwe emva kokusweleka ziingqondo zabantu abaninzi.
Ezinye iicawa zeli xesha lethu azikhathali njengangaphambili. Ezinye zeenkolo zakudala zavumela ingqondo ukuba idlule esihogweni ukuze iyonwabele umvuzo wayo ngokulunga eyenzileyo ngexesha lobomi bomzimba. Elinye ihlelo lenkolo yobuKristu liyigcinile idemon yakhe kwaye likhupha umntu esihogweni, ukuba abahlobo bakhe bayakuhlawula imali yakhe kunye neendleko zokuya ecaweni. Kodwa akukho tyala liya kuthathwa ngenxa yendoda eyayingalumkanga ngokwaneleyo ukuba ingene kuloo cawa ngaphambi kokuba isweleke. Kuya kufuneka aqhubeke esihogweni rhoqo, kwaye usathana unokwenza naye njengoko ethanda, utsho. Amanye amahlelo anciphisa umvuzo wabo ngokuba ngqongqo ngakumbi kwizigqibo zabo. Akukho shishini lifana okanye enye indlela yokuphuma esihogweni sabo. Ukuba ungena kufuneka uhlale ngaphakathi. Ukuba ungena okanye uqhubeka ukuphuma kuxhomekeke ekubeni awukholwa okanye awukholwa na kwisithethe ngasinye kwezo cawa.
Kodwa ke, nokuba ziyintoni na iicawe, inyani yile yokuba emveni kokuba usathana, umnqweno obekwisimo, abonakalise kwaye egxeka ingqondo yazo zonke izinto eziphosakeleyo azenzileyo ebomini, nasemva kokuba ingqondo ithotyiwe yimbandezelo ebangelwa yiminqweno evuthayo. emva koko usathana akasenako ukubamba ingqondo, inkampani yengqondo kwaye kukho ukuphela kwesihogo. Ingqondo iqhubeka nendlela yayo yokonwabela ixesha lokuphumla kwayo okanye ukuphupha ngeenjongo zayo, ulungiselelo lokubuyela kumzimba wenyama ukuqala elinye ikota yokufunda kwiklasi yayo ebomini. Usathana uhlala kwimeko yomnqweno okwethutyana, kodwa loo meko ayisiyiyo isihogo somnqweno. Ukuba awunangqondo, usathana akakwazi ukuqhubeka njengohlobo kwaye ke ngokuthe ngcembe usonjululwa kwimikhosi ethile yomnqweno awayenziwe. Eyo sisiphelo sedemon ethile.
Isihogo kunye nomtyholi akufuneki ziqwalaselwe luloyiko nokungcangcazela. Isihogo kunye nomtyholi kufuneka ziqwalaselwe nguye wonke umntu onokucinga kwaye onomdla kwimvelaphi yakhe kunye nekamva lakhe. Usisidibanisi nakwabo basasokola ngenxa yokujija abanikwa iingqondo zabo ngoqeqesho lwakwangoko. Sinokuqiniseka ukuba isihogo kunye nomtyholi zikhona asinakubabaleka ngokuzama ukubaleka nokungabazi. Okukhona esazi ngakumbi umtyholi kunye nesihogo esincinci asabayo. Zivale ukuba siyafuna, kodwa ziya kuqhubeka de sibazi kwaye sibaphelise.
Kodwa kutheni ingqondo ihlupheke isihogo, kwaye iyintoni injongo yako? Ingqondo ithwala ubunzima ngenxa yesihogo kuba ayizizelanga buso ngaphezulu kwayo, ngenxa yokuba amandla ayo engaphuhliswanga, edityaniswayo kunye nokulungelelaniswa komnye komnye, kuba kukho apho ukungazi, okuchasene nolungelelwano nemvisiswano, ekutsalwa iimvakalelo. Ingqondo iya kuba phantsi kwesihogo de ibe iyakhula kwaye ilungelelanise amandla ayo, ithathe indawo yokungazi ngolwazi kwaye ifumane ukuqondakala ngaphezu kwayo.
Injongo yehlabathi kunye nomnqweno, umtyholi, kukusebenzisa kunye nokufundisa ingqondo ngokuyinika amava ngokusebenzisa imvakalelo, ukuba yahlule phakathi kwento eyenzeka ngayo kunye neziphumo zoluvo, kwanokuzoyisa inkcaso. Unikezelwa ngumnqweno wokuba amandla engqondo aphuhliswe, kwaye ke ekugqibeleni ingqondo iyafikelela ekuqondeni nasekusebenzeni ngokwayo nasekuziqhelaniseni ngokwayo, ukuya kulwazi lwayo nenkululeko. Ngaphandle kwamava, akukho luvo; ngaphandle kwemvakalelo, akukho kubandezeleka; ngaphandle kokubandezeleka, akukho kuxhathisa kwaye ngaphandle kokuxhathisa akukho ukuzilawula; ngaphandle kokubeka, akukho lwazi; ngaphandle kolwazi, akukho nkululeko.
Isihogo sinikezelwe kwingqondo ngomnqweno, into eyimpumputhe kunye nokungazi kwanto yezilwanyana kwaye okunqwenela ukunxibelelana kwengqondo, kuba ukubonakalisa kwayo ngokuboniswa kungaviswa ingqondo kuphela. Umnqweno uyoliswa yintlungu kanye njengokuzonwabisa, kuba unikezela uvakalelo, kwaye uvakalelo luyinto uyolo lwalo. Ukuhlaziya ayiyonwabisi ingqondo, ingqondo ephezulu, hayi umzimba.
Isihogo yintsimi yedabi lengqondo kunye nomnqweno. Isihogo kunye nomnqweno aziyohlobo lwengqondo. Ukuba ingqondo ibingokwemvelo yomnqweno, ngoko umnqweno awuyi kunika isihogo okanye ukubandezeleka engqondweni. Ingqondo ihlangabezana nesihogo kuba yahlukile kwaye ayifani ngohlobo lwalo. Kodwa iyahlutha kuba ithathe inxaxheba kwisenzo esikhokelela esihogweni. Ukubandezeleka kwengqondo kuhlala kuthatha ixesha elithathayo lazahlula kwinto eyahlukileyo ngohlobo kuyo. Ekuzikhululeni kumnqweno nakwisihogo emva kokufa akufumani nkululeko naphakade.
Isizathu sokuba ingqondo inxibelelane kwaye isebenze ngomnqweno, eyahlukileyo kwaye ingeyiyo, kukuba kukho umgangatho kwinqanaba elinye leengqondo ezikwimo yesifiso. Olu phawu luphawu olumnyama lwengqondo. Ubuso obumnyama bengqondo kukuba ngaphakathi nangaphakathi kwengqondo umnqweno utsala ingqondo. I-faculty emnyama yeyona ndawo ingalawulekiyo yengqondo kunye neyenza ukubandezeleka kwenzeke engqondweni. Ingqondo itsalwa ngumnqweno ngenxa yobuso obumnyama bengqondo. Ubomi obunobungqwabalala kunye nobuntununtunu kwimizimba yenyama, kunye nomgaqo jikelele womnqweno, unamandla phezu kwengqondo. Xa ingqondo yoyisa kwaye ilawula ubuhlakani bayo obumnyama, umnqweno awuyi kuba namandla phezu kwengqondo, umtyholi uya kudanjiswa kwaye ingqondo ayisoze iphinde ihluthwe sisihogo, kuba akukho nto kuyo enokutsha imililo yesihogo.
Inkululeko esihogweni, okanye umtyholi, okanye ukubandezeleka, inokufunyanwa kuphela ngelixa ukwinyama yomzimba. Isihogo kunye nomtyholi boyiswa yingqondo emva kokufa, kodwa okwethutyana. Umlo wokugqibela kufuneka ugqitywe ngaphambi kokuba ufe. Kude kube kuliwe idabi lokugqibela kwaye liphumelele, ingqondo ayinakuzazi njengesiya kuhlala sisazi inkululeko. Ingqondo nganye kubomi obuthile bomzimba iya kubandakanyeka kumlo wayo wenkululeko. Isenokungaphumeleli koyisa kobu bomi, kodwa ulwazi olufunyenwe ngamava ayo okulwa iya kongeza kumandla ayo kwaye iwenze ulunge ngakumbi kumlo wokugqibela. Ngomzamo oqhubekayo kuya kubakho umlo wokugqibela kwaye uya kuphumelela kuloolo.
Umnqweno okanye umtyholi akakaze abongoze umzabalazo wokugqibela. Xa ingqondo ilungile iqala. Nje ukuba ingqondo iphike ukuqhutywa ngumnqweno kwaye iyala ukuvumela nayiphi na iminqweno eyayazi ukuba ayifanele ikwazi ukuvumela, ke ingena esihogweni. Isihogo yimeko yokubandezeleka kwengqondo kumzamo wayo wokoyisa ukungazi kwayo, ukufumana ulwazi lokuzilawula kunye nolwazi. Njengoko ingqondo imi ngakumhlaba wayo kwaye ingavumi, usathana uyakhuthala ngakumbi kwaye asebenzise umkhamo wakhe kunye nemililo yesihogo itshisa ngakumbi. Kodwa ngaphandle kokuba umlo uwanikwe ngokupheleleyo imililo ivuselelwe lutsha ngokuzisola, ukuzisola kunye nentliziyo ebuhlungu ngenxa yokuba uvelisile kunye nokubonakala ngathi kusilele. Njengoko ivuselela umlo okanye iqhubeka nokuma komhlaba wayo, zonke iimvakalelo zixelwe kumda woxinzelelo; kodwa abayi kuqhekeza. Zonke iifayile kunye neminqweno kunye nokufakelwa okuvela kubudala beminqweno kuya kubonakala kwindlela yengqondo "kwimvelaphi yayo" yesihogo. Imililo yesihogo iya kwanda ngakumbi njengoko ingqondo iqhubeka ukubachasa okanye ukuphakama kubo. Njengoko ingqondo iyala ukwanelisa okanye unikezela indlela kuzo zonke izinto ezibenqwenelayo, kwaye njengoko isala ukuyekelela ekutsaleni okanye ekulangazeleleni ngokwesini, ukutshisa kuya kukhula kube krakra kwaye imililo ibonakala ngathi iyavutha. Kodwa ukubandezeleka akupheliswa, kuba endaweni yayo kuza ulize kunye nemvakalelo yokutshiswa kunye nokungabikho kokukhanya, okuothusa njengomlilo oshushu. Umhlaba uphela uba sisihogo. Ukuhleka kufana nokubhana okungekho nto okanye ukububula. Abantu banokubonakala ngathi bangama-maniacs okanye izidenge ezilahliweyo ezigxotha izithunzi zazo okanye zibandakanyeka kwimidlalo engenamsebenzi, kwaye ubomi bomntu bubonakala ngathi bomile. Okwangoku ngelixesha lokuqaqanjelwa kakhulu yingqondo iya kwazi ukuba ingamelana nazo zonke iimvavanyo, iimvavanyo kunye noxinzelelo lwalo naluphi na uhlobo ukuba ingafuna, kwaye ayinakusilela, ukuba ayizukuvelisa, kwaye iya koyisa ukuba iyavuma bambelela ngaphandle.
Usathana ukuba ulwe awukho emzimbeni womnye umfazi okanye indoda. Usathana kufuneka alwe kwaye oyiswe kukwizinto zomzimba wakhe. Akukho namnye umntu okanye umzimba ngaphandle komntu oza kugxekwa ngulowo ucele umngeni kwisidemon kwaye ungene esihogweni. Umbono onjalo kukuqhatha kukaMtyholi, othi ke azame ukulahla ingqondo yakhe kumkhondo kunye nokuthintela lowo ulwayo ukuba angaboni uSathana. Xa omnye etyhola omnye ngokubandezeleka, ngokuqinisekileyo lowo akasalwisi umlo wenene. Ibonisa ukuba izama ukubaleka okanye ikhusele emlilweni. Uphethwe likratshi nokuzigwagwisa, kungenjalo umbono wakhe unamafu kakhulu kwaye akanakuqhubeka nokulwa, ke uyabaleka.
Ingqondo iya kwazi ukuba ukuba ivelisa kwaye inike indlela yokuthambekisa kweemvakalelo okanye kumabhongo amandla, ayikwazi ukuba kobu bomi bokwenyama ukuba ibe kukungafi kwaye ifumane inkululeko. Kodwa ke ingqondo elungeleyo iyazi ukuba, ukuba ayizukunikezela kuzilangazelelo okanye kwizilangazelelo, iya kuthi kobu bomi yoyise umtyholi, icime isihogo, yoyise ukufa, ibe kukungafi kwaye ibe nenkululeko. Lo gama nje ingqondo inokutsala nzima esihogweni ayifaneleki ukuba inokungafi. Ukuba kwingqondo okanye kwingqondo okanye ngengqondo enokubakho kugadalala wesihogo-somlilo akunakuphela kwaye kufuneka kutshiswe ukuze ingqondo ibe nesazela ukungafi. Isihogo kufuneka sidlule kwaye imililo yayo kufuneka itshise kude kube konke ukutshiswa kungatshiswa. Umsebenzi unokwenziwa kuphela ngokuzithandela, ngesazela nangokuqonda nangokungaphindanga wenziwe. Akukho kungathobeki. Esihogweni akukho mntu kwaye sithintelwa yinkoliso yamadoda. Abo bazilungiselele baya kuyingenela kwaye bayoyise.
Kwinombolo kaDisemba, uMhleli uza kuba malunga ne-AKAVEN.